Comcast ၏နာမည်ပျက်စာရင်းမှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသည် Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇူလိုင်လ 18, 2008 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 11, 2013 Douglas Karr
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းမှအီးမေးလ်အမြောက်အများကိုအီးမေးလ်စျေးကွက်သို့ပို့လျှင်သင်သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အဓိကအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ပေါင်းစည်းထားကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ အဖြူရောင်စာရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးယခင်ကကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည် AOL နှင့် Yahoo က! ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းခံရနိုင်သည့်ပြthereနာတစ်ခုရှိနိုင်သည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည် Comcast။ Comcast ပါဘူး သူတို့ကသင့်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုပိတ်ဆို့နေခြင်းရှိ၊ မရှိသိနိုင်ဖို့အချက်အလက်အချို့.
ငါအတိတ်ကာလ၌ရေးသားခဲ့သည် ဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်နာမည်ကောင်းရရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည် သင်၌အပြစ်မရှိသော်လည်းအီးမေးပို့နိုင်မှုပြissuesနာ.
Comcast ကကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ကကျွန်မကို link တစ်ခုပါတဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်ကျသွားတယ် Comcast ၏ပိတ်ထားသောပေးသူတောင်းဆိုမှုပုံစံ။ ငါပြီးပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်လိုက်ပြီ၊ မျှော်လင့်ချက်အနေဖြင့်အသုံးပြုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာကိုတောင်မှမရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးညတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
Comcast ၏ DNS ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအွန်လိုင်းအိပ်မက်ဆိုးအချို့ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးပါပြီ။ အသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည် OpenDNS ကြားဖြတ်အစိုးရအတွက်။